Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, yabirutsa gwaro rinoti pane vadzidzisi vezvidzidzo zvesainzi mazana maviri nemakumi maviri vakasiya basa gore rino vachienda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika zvikuru kuMiddle East vachichemachema kuti zvinhu zvamira nemusoro munyika.
Gwaro iri, iro riri kudaidzwa kuti Education in Crisis Report, rinotiwo kusabhadharwa zvakanaka kwevarairidzi kuri kuitawo kuti varairidzi vashaye simba rekuita basa ravo.
Mutauriri weARTUZ, VaNation Mudzitirwa, vati izvi zviri kudzosera dzidzo yemunyika kumashure zvakanyanya.
VaMudzitirwa vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro pamwe nekudzidzisa varairidzi vakawanda kumayunivhesiti kuitira kuti zvidzidzo zvesainzi munyika zvisarambe zvichisarira kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaGodfrey Kanyenze, vati vashandi havangarambe vakagarira guyo sembwa.
VaKanyenze vatiwo chinodikanwa ndechekuti hurumende iite nhaurirano nevashandi nevashandirwi kuitira ikwanise kugadzirisa nyaya dzezvehupfumi munyika.
Gurukota rinoona nezvevashandi, VaPaul Mavhima, vakaudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti hurumende iri mubishi kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unosangana hurumende, vashandi nevemabhizimusi kuti vazeye nyaya dzemari dzemihoro pamwe nekuti hupfumi hwenyika hungafambiswa sei.
Zvichakadai, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo, VaTaungana Blessing Ndoro, vaudza Studio 7 parunhare kuti sehurumende vari kuronga kuti vatsvage vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu zvichatsiva vakasiya mabasa ava pamwe neavo vanenge vachiramwa mabasa vachiti vari kuda kuwedzerwa mari sezvo vachiti hurumende haina mari iri kudiwa nevarairidzi.